သင့်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီး ခန္တာကိုယ်က Smart ကျ​နေဖို့ဆိုရင် ဒီနေ့ မှ စပြီး ဒီအချက်တွေကို လုပ်ကြည့်လိုက်ပါ
1. ရေများများသောက်ပါ 2. မနက်စာကို ဘုရင်လိုစား၊ နေ့လည်စာကိုတော့ မင်းသားလေးလိုစား၊ ညစာကိုတော့ သူတောင်းစားလို စားပါတဲ့။ (အားလုံး နားလည်ကြမှာပါနော်) 3. သစ်ပင်ပေါ်က ရတဲ့ ဟင်းသီး ဟင်းရွက်တွေကို များများစားပေးပါ 4. ဘ၀မှာ3E နဲ့ ရှင်သန် နေထိုင်ပါ […]
ဘူးချင်ကြဦး ကိုဖိုးသန် နဲ့ ရဲမျိုးတို့ နှစ်ယောက် အိမ်ပြန်လာတယ်။ လမ်းမှာ ” ဟေ့ … ရွှတ် ရွှတ် ” နဲ့ ခေါ်သံကြားလို့ ရဲမျိုးက လိုက်ကြည့်တော့ အမျိုးသမီး ချောချော တယောက် ကို တွေ့တယ် …. ။ သူတို့ […]
သငျ့ကိုအရမျးလှမျးနမှေနျးသိနိုငျမယျ့ ထူးထူးခွားခွား လက်ခဏာ (၃) မြိုး…
အခဈြမှာ ထူးဆနျးတဲ့ မှျောစှမျးအငျရှိတယျလို့ လူတဈခြို့ကပွောကွပါတယျ။ ခဈြတဲ့စိတျနဲ့ တဈစုံတဈယောကျက ကိုယျ့ကိုလှမျးတဲ့အခါ သူတို့ကိုယျတိုငျက ဖှငျ့မပွောရငျတောငျ သဘာဝတရားကွီးက သူတို့အစား ပွောပေးတတျပါတယျ။ လူတဈယောကျက သငျ့ကို ဖှငျ့မပွောပဲ တိတျတိတျလေးအရမျးလှမျးနတေယျဆိုတာကို သိနိုငျမယျ့လက်ခဏာတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ (၁) အိပျမကျမကျတယျ အိပျမကျဆိုတာ စိတျဝိညာဉျမှာဖွဈနတေဲ့ အရာတဈခုပါ။ တဈစုံတဈယောကျရဲ့အကွောငျးကို မပွောမိ၊ […]
ချောကလျာ သေပြီ အရာရှိကြီးတစ်ယောက်သည်နယ်သို့ ရက်အတန်ကြာခရီးထွက်ရန်ဖြစ်လာသည်။ အသက်ငယ်သောဇနီးချောကို စိတ်မချသဖြင့်အရင်းနှီးဆုံး သူငယ်ချင်းကို မှာသည် “သူငယ်ချင်းမင်းငါ့မ်ိန်းမအကြောင်းသိသူမို့မှာပါရစေ၊ တစ်ခြားယောက်ျားတွေနဲ့ဖောက်ပြားတယ်လို့သံသယရှိရင်’ချောကလျာနေမကောင်း’ လို့ကြေးနန်း ရိုက်ပါ၊ အဲ၊ ဒင်း ဖောက်ပြားတပ်အပ် မြင်တယ်၊သေချာတယ်ဆိုရင်’ချောကလျာသေပြီ’လို့ ရိုက်ပေးပါ” နယ်ထွက်ပြီး နောက်ရက်မှာပင်ဇနီးဖြစ်သူသည် တစ်ခြားယောက်ျားတွေနှင့် ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတွဲခုတ်တော့သည်။အိမ်ခေါ်ပြီး ဟေးလားဝါးလားနှင့်နေသည်။ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် အရာရှိကြီးတာဝန်ဖြင့်သွားရောက်စစ်ဆေးသည့်စက်ရုံသို့ ကြေးနန်းရိုက်သည် […]
အအေးလှိုင်းဖြတ်ချိန် သမီးကို စောင် အကုန်ပေးပြီး စောင်မခြုံဘဲ အိပ်လို့ သေသွားခဲ့တဲ့ ဖခင်
ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းက အသက် (၃၈) နှစ်အရွယ် ဖခင် တစ်ဦးဟာ သူ့သမီး (၂) ယောက်ကို စောင်ပေးပြီး စောင်မခြုံဘဲ အိပ်တဲ့ အချိန်မှာ အေးခဲလွန်းတာကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ် သူ့ရဲ့ အမျိုးတွေက သူဟာ သူ့ရဲ့ ဇနီးသည်နဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေ ကတည်းက ကွာရှင်းသွားခဲ့ပြီး၊ […]
အအေးလှိုငျးဖွတျခြိနျ ည၁၁နာရီကြျော လမျးဘေးမှာ အိမျခွမေဲ့ အိပျနသေူတှကေို အနှေးဓာတျလိုကျပေးတဲ့ ခဈြစရာအဖှဲ့လေး..
လူကဒီကာလလေးမှာမှ အလုပ်လေးတွေလုပ်ရတယ် …..နေ့တွေညတွေမှားပီး မအိပ်ရတဲ့ရက်တွေများခဲ့တယ် …..ဒါမဲ့ တနေ့တခြားအေးလာခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်ဆောင်းအတွက် အိမ်ခြေမဲ့လေးတွေ တခြားအကြောင်းမျိုးစုံနဲ့ အနွေးဓာတ်လိုမယ့်လူတွေအတွက် တွေးရင်း စိတ်ပူလာခဲ့တယ် ….. ဒါနဲ့ပဲ နေမထိ ထိုင်မသာနဲ့ ကိုယ့်ချွေးနှဲစာလေးတွေနဲ့ စောင်အထည် ၁၀၀ ကိုပထမရက်မှာ ကိုယ်အချစ်ရဆုံးသူငယ်ချင်းတွေနဲ့လှူနိုင်ခဲ့တယ်….နောက်တရက်မှာတော့ ကိုယ့်ကိုယုံကြည်စွာနဲ့လှူပေးတဲ့သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေတွေရဲ့ စောင်လေးတွေကိုလှူပေးခဲ့တယ် …. […]
အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေရဲ့ အားသာချက် (၈) ချက်.
အဆင်ပြေတဲ့ အချစ်ရေး ဖြစ်ဖို့အတွက် နေ့တိုင်း အမြဲတမ်း တွေ့နေစရာ မလိုပါဘူး။ အနေဝေးနေပေမယ့် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နားလည်မှု ရှိနေရင် အဆင်ပြေနေ မှာပါ။ အနေဝေးတဲ့ စုံတွဲတွေမှာလည်း အားသာချက်တွေ ရှိပါတယ်..။ 1.သေးသေးမွှားမွှား ဂရုစိုက်တာက အစ တန်ဖိုး ရှိပါတယ်..။ ဖုန်းဆက်တာ၊ message […]
၉ တန်းကျောင်းသူလေးတွေရဲ့ မိဘများ ရင်နင့်စရာ ဖြစ်ရပ်
မိန်းကလေးတယောက်ဆို အကျီ ကြယ်သီးပါပြုတ်နေတယ် … သူတို.ကို ဘာဖြစ်တာလဲလို. လှမ်းမေးတော့ ကောင်လေး တစ်ယောက်က .ထမင်းစားချိန် ဆိုင်သွားဖို. ဖြတ်လမ်း ကြား ကနေ အဖြတ် ကိုးတန်း ကလေး မိန်းကလေး ငါးယောက် ကို တယောက် စီ ကောင် လေးေ[…]